News Collection: जेलभित्रै बच्चा जन्मनुको रहस्य
जेलभित्रै बच्चा जन्मनुको रहस्य
भनिन्छ, 'प्रेम अन्धो हुन्छ, प्रेमलाई कसैले रोक्न सक्दैन, प्रेम गर्न न कुनै ठाउँ चाहिन्छ, नत कुनै जात-धर्म नै।' प्रेमका विभिन्न परिभाषा हुन्छन्। विराटनगरमा यस्ता प्रेम जोडी भेटिएका छन्, जसलाई जेलको पर्खालले समेत रोक्न सकेन। उनीहरू दुवै कैदी हुन्, महिला र पुरुष कारागारमा बस्दै आएका जोडीको प्रेम यसरी झांगियो कि अन्ततः जेलभित्रै शारीरिक सम्बन्ध विकसित हुन पुग्यो त्यसको परिणाम जेलभित्रै बच्चा जन्मिएको छ।
यो प्रसंग मोरङ कारागारभित्रको हो जहाँ महिला र पुरुषका लागि फरक सेल छ। दुवै तर्फकाले बोल्न त के देख्नसम्म पाउने अवस्था छैन। यो जोडीले प्रेमलाई यसरी सफल बनायो कि अहिले उनीहरूले त्यसको प्रतिफल छोरी पाएका छन्। श्रीमान्को हत्या गरेको प्रमाणित भएपछि २०६१ सालमा जेल परेकी खोटाङ बुइपाकी ३५ वर्षीया सीता सार्की र डाँका मुद्दामा सात वर्षअघिदेखि जेलमा रहेका धरानका ३२ वर्षीय दीपक परियारबीचको प्रेम परिणाम यतिबेला चर्चामा छ।
पुरुष सेलतर्फका सफाइ नाइके दीपक र महिला सेलतर्फकी सफाइ नाइके सीताबीच सफाइकै क्रममा माया बस्यो। सफाइ गर्ने काम भएकाले फोहोर फाल्न उनीहरूले जेलबाहिर (कारागार कम्पाउन्डभित्रको क्षेत्रमा) निस्कन पाउँछन्।
पाँच वर्षअघि सीता खोटाङ कारागारबाट सरुवा भएर मोरङ कारागारमा आएलगत्तै उनीहरूबीच परिचय भयो। 'चिनजानको दुई महिनामै हामी प्रेम गर्न थाल्यौं,' दिपकले भने- 'प्रेमको प्रस्ताव उनैले राखिन्।' उनीहरू दुवैले एक-अर्कालाई मन पराउन थालेपछि सीताले पत्र लेखेर दीपकको हातमा राखी दिइन्। पुरुष कारागारमा आएर पत्र हेर्दा त्यसमा 'म तपाईंलाई मन पराउँछु' लेखिएको थियो। भोलिपल्टै दीपकले पत्रको जवाफ मुखैले दिए 'आई लव यू' भनेर।
उनीहरूको माया मौलाउँदै गयो। चिठी आदान-प्रदानको काम चल्दै गयो। उनीहरूले दसैंमा टीका लगाएर चुम्बन गरेको तस्बिरपनि खिचाए। चार वषर् अघिको कुरा हो। दीपकले मेहनतका साथ आफ्नै हातले पोते बनाए र महिला सेलमा छिरे। पिकेट ड्युटीमा सीता भेटिइन्। एक्लै भेटिएकी सीतालाई दीपकले सिंदुर र पोते लगाइदिए। त्यस दिनदेखि उनीहरू श्रीमान्-श्रीमती भनेर साइनो लगाउन थाले।
विवाह त भयो, उनीहरूबीच सुहागरात भने त्यसको तीन वर्षपछि मात्रै सफल भयो। 'गएको जेठमा एक दिन पानी परिरहेको थियो, हामी प्रहरीको मेसमा छिर्यौं,' दीपकले सुहागसाँझको कुरा सुनाउँदै भने-
'प्रहरीहरू अदालत गएका थिए, त्यही मौका पारेर हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध भयो।'
प्रहरीको मेसमा रहेको खाटमा टाबेल ओच्छ्याएर आफूहरूले दुई पटक सम्बन्ध राखेको दीपकले बताए। त्यसको तीन दिनपछि प्रहरीको मेस खाली देखेर उनीहरूले छोटो समयमै एकपटक सम्बन्ध राखे।
सीताले आफु गर्भवती भएको कुरा पनि दीपकलाई सुनाइनन्। यही फागुन २३ गते मात्र सीताले गर्भ रहेको जानकारी गराएको दीपकले बताए। त्यसको पाँच दिनपछि अर्थात् २८ गते नै सीताले छोरी जन्माएकी हुन्। महिला कारागारकी आन्तरिक प्रशासन प्रमुख रसिदा खातुन सीता मोटाएको थाहा भए पनि गर्भवती भएको आफूहरूले अनुमानसम्म नगरेको बताउँछिन्।
बच्चा जन्मनुभन्दा झन्डै एक साताअघि मात्र आफूले उनी गर्भवती भएको थाहा पाएको खातुन बताउँछिन्। पुरुष कारागारतर्फका आन्तरिक प्रशासन प्रमुख वीरेन्द्र मेहता पनि उनीहरूले एक-आपसमा श्रीमान्-श्रीमती भनेर सम्बोधन गर्न थालेको थाहा पाए पनि जेलभित्रै शारीरिक सम्बन्ध राखिसकेको आफूहरूले अनुमानसम्म नलगाएको बताउँछन्। 'श्रीमान्-श्रीमती भन्थे, 'बाहिर गएर विवाह गर्छन् होला भन्ने लागेको थियो,' मेहताले भने।
जेलभित्र सीता सुत्केरी भएको खबर बाहिर आएपछि जेल प्रशासनले उनीहरूबीच शौचालयमा शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा सार्वजनिक गर्‍यो तर वास्तविकता अर्कै रहेछ। जेलभित्र बच्चा जन्मिएको विषयमा प्रशासनले छानबिन समिति बनाएपछि मात्र उनीहरूले कारागार सुरक्षामा बसेको नेपाल प्रहरीको खाना खाने मेसमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको रहस्य खुल्यो।
जेलमा बच्चा जन्मिएपछि दीपकलाई बाहिर निस्कन तथा सफाइको काम गर्न दिइएको छैन। आफ्नी छोरी जन्मिएको थाहा पाए पनि अनुहार हेर्न नपाएको गुनासो दीपकले तीन दिनपछि गरे। उनले जेलरसँग पनि छोरीको अनुहार हेर्न पाऊँ भनेर आग्रह गरेका छन्। छोरीको अनुहार नदेखे पनि उनले आफ्नो नाम दीपक भएकाले छोरीको नाम दिपीका राख्ने निधो गरिसकेका छन्।
सीताका यसअघिको श्रीमान् तर्फका दुई छोरी छन् भने दीपकका दुई छोरी र एक छोरा छन्। उनी दुवै तर्फका छोराछोरी गरी छ जनाका बाबु भएका छन् । दीपक जेल परेपछि उनकी श्रीमतीले घर छाडेकी थिइन्। आफूलाई श्रीमतीले छाडेकाले सीतासँग विवाह गर्न तयार भएको उनले बताए। आगामी जेठमा जेल जीवन समाप्त गर्न लागेका दीपक धरानमा ट्याक्सी चलाएर छ जना छोराछोरीलाई शिक्षा दिने बताउँछन्।
सीताको सजाय सकिन एक वर्ष भन्दा बढी छ। आफू बाहिर निस्किएपछि सीतालाई पर्खन्छु भन्ने दिपकले सीतासँग बाजा बजाएर फेरि विवाह गर्ने बताए। दिपकका आमा, दाजुभाउजू र बहिनीले पनि सीतालाई स्वीकार गरिसकेका छन्। उनीहरू बेला-बेला कारागारमा आएर सीतालाई पनि भेट्छन । जे लभित्रको प्रेम जोडीलाई भेट्न साप्ताहिकले पटक-पटक प्रयास गर्दा मोरङ प्रशासनले दीपकलाई मात्र भेट्ने अनुमति दियो। सीता सुत्केरी रहेकाले उनलाई भेट्न दिइएन। जेलभित्रै बच्चा पाएकी सीता र छोरीको स्वास्थ्य राम्रो रहेको महिला कारागार आन्तरिक प्रशासनले जनाएको छ। जेलभित्र महिला सुत्केरी भएको खबर सुन्ना साथ जेलर सुनिल निरौलाको चिन्ता बढेको छ। आफू हुँदै दुई कैदीबीच भएको सम्बन्धको परिणामका कारण कारबाहीमा परिने शंकाले निरौला चिन्तित छन्।
बिदा लिएर काठमाडौ पुगेका जेलर निरौला कैदी सुत्केरी भएपछि बिदा नसकिँदै हतारमा विराटनगर आइपुगे। यसअघि पनि मोरङ कारागारमा दुई जनाको प्रेम झाँगिएको प्रसंग हालसम्म ताजै छ। चार वर्षअघि चौकीदार शम्भु चौधरी र महिला बन्दी अनिता बस्नेतबीच प्रेम सम्बन्ध थियो। त्यसबेला शम्भुले अनिताको धरौटी राखिदिएर छुटाएर विवाह गरेका थिए।
बग्रेल्ती प्रेम जोडी
मोरङ कारागारभित्र अहिले पनि २० जना जति प्रेमी-प्रेमीका रहेको प्रहरीको अनुमान छ। महिला र पुरुष कारागारमा चिठी आदान प्रदान भएको देख्दा त्यो अनुमान लगाउन सकिने एक प्रहरीले बताए। कारागारमा धेरै जना कैदी बन्दीहरू प्रेमी-प्रेमीका भएको जेलर निरौलाले पनि स्वीकार गरे। चाडबाडमा बाहिर निस्कन पाइने भएकाले उनीहरू भेट गर्छन्। फोटो खिची केही बेर कुराकानी गरेर भित्र पस्ने गरेका छन्। केही अघिसम्म सातामा एक पटक महिला कैदी बन्दीलाई पुरुष कैदीबन्दी रहेको पिकेटसम्म आएर भेट्न दिने व्यवस्था थियो। अहिले भने त्यसमा रोक लगाइएको छ।
सुरेन्द्र पौडेल, छानबिन समिति
संयोजक तथा मोरङका सहायक प्रजिअ
जेलभित्रै बच्चा जन्माउने काम कसरी सम्भव हुन्छ ?
दुवै जना नाइकेमा नियुक्त भएकाले कम्पाउण्डभित्र प्रशासन र सुरक्षाकर्मीसँग सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गर्छन्। त्यही भएर उनीहरू बाहिर निस्कन पाए।
उनीहरूबीचको प्रेम नै हो कि वासना मात्रै रहेछ ?
दुवैको कुरा बुझ्दा प्रेम नै हो भन्ने बुझियो। बाहिर गएर विवाह गर्छौं भनेका छन्।
उनीहरूको प्रेम दिगो होला त ?
दिगो नै हुन्छ त भन्न सक्दिनँ तर, अहिलेको परिस्थितिमा दुवैबीच प्रेम झाँगिएको छ। उनीहरूको प्रेम र जेलभित्रको विवाह चाल्र्स शोभराज र निहिता विश्वासको जस्तै हो।
उनीहरूको परिवारले स्वीकार गर्ला ?
उनीहरू अदालतले अपराधी प्रमाणित गरेर यहाँ आएका हुन्। अनेक हन्डर-ठक्कर खाएकाले उनीहरूलाई कसैको साथको खाँचो थियो। केटाका परिवारले पनि केटीलाई स्वीकार गर्ने देखिएको छ। केटाका परिवारले खानेकुरा ल्याइदिने नाता लगाएर बोलाउने गर्दा रहेछन्।
बाहिर आएर गरी खालान् त ?
घरजम गर्छौ भन्छन्। दुवैको कुरा सुन्दा गरी खालान् जस्तो लाग्छ।
यो घटनालाई मोरङ प्रशासनले कसरी हेरेको छ ?
सुरक्षाको लापरबाही हो। उनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने वातावरण दिनु हुँदैनथ्यो। छानबिन भैरहेको छ। जिम्मेवारहरू कारबाहीको सिफारिस हुनसक्छ। समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप कुरा खुल्छ।